Ịzụ ahịa nri agụụ nwere ike iduga na nhọrọ nri kalori dị elu - Ụwa 2022
Ịzụ ahịa nri agụụ nwere ike iduga na nhọrọ nri kalori dị elu
Njem na nnukwu ụlọ ahịa na afọ na-eto eto nwere ike ịgba gị ume ịzụta nri calorie dị elu, nchọpụta ọhụrụ na-atụ aro.
Dr. Brian Wansink na Dr. Aner Tal, ndị na-eme nchọpụta sitere na Mahadum Cornell, mere nchọpụta mbụ nke ụlọ nyocha na nyocha nke ubi na-elekwasị anya na ụkọ nri na mmetụta ya na nhọrọ iri nri.
Ndị otu nyocha ahụ jụrụ 68 ndị nyere aka na-akwụ ụgwọ na nyocha ụlọ nyocha ka ha ghara iri nri awa ise tupu ọmụmụ ihe. A na-enye crackers ma ọ bụrụ na ndị sonyere na-akọ na agụụ na-agụ ha n'oge nnwale ahụ.
Mgbe e mechara nye ndị sonyere nri nri, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-ezere nri nwere obere kalori ma rịọ maka nhọrọ nri kalori dị elu.
Ọmụmụ ihe nlebanya ahụ sochiri nhọrọ nri maka ndị na-azụ ahịa n'ihe gbasara oge nke ụbọchị n'ime oge nke ọ ga-abụ na agụụ na-agụ ha (na-emekarị n'etiti 4 na 7 p.m.).
Ndị na-azụ ahịa maka nri mgbe agụụ na-agụ ha na-ahọrọ nhọrọ nri nwere obere calorie ma e jiri ya tụnyere ndị na-azụ ahịa mgbe agụụ na-agụ ma zụta nri nwere calorie dị elu.
"Ọbụna ụkọ nri na-adịru nwa oge nwere ike iduga ngbanwe na nhọrọ ndị dị otú ahụ na ndị mmadụ na-ahọrọ obere kalori dị ala, na obere calorie dị elu, nhọrọ nri," Dr. Wansink na Dr. Tal kwubiri na nchọpụta ha.
"N'iburu ụba nke ụkọ nri dị mkpirikpi, nke a nwere mmetụta ahụike dị mkpa."
E bipụtara nchoputa nke otu ahụ na ntanetị nke May 9 nke JAMA Internal Medicine.